Uqothwe ngenhlamvu phambi kwentombi owakwaDambuza | News24
Uqothwe ngenhlamvu phambi kwentombi owakwaDambuza
KUSAYINDIDA ukudutshulwa kubulawe owesilisa wakwaDambuza, nodutshulwe wabulawa ngezintathakusa zangoMsombuluko eMbali Unit J.
USkhumbuzo “Maweekend” Phoswa, oneminyaka engu-21, udutshulwe abasolwa abangaziwa ngezinhlamvu eziyisishiyagalombili (8) nokuthiwa enye ingene emlomeni.
Ngokuthola kwe-Maritzburg Echo ngomthombo osondelene kakhulu nalolu daba, kuthiwa umufi ubephuma endaweni yokuzijabulisa e-033 Lifestyle ngesikhathi ehlelwa ilomshophi. Abasolwa kuthiwa bashiye imoto bude buqamama nalapho kwenzeke khona isigameko base belandela umufi ngezinyawo.
“Kuthiwa umufi ubehamba nentombi yakhe bephuma ukuyozijabulisa. Okusididayo ukuthi ubengasuka kanjani eMbali Unit 3 ahambe ngezinyawo ashiye imoto abebehamba ngayo? Yena lona wesifazane abehamba naye usale kanjani? Kungani lezigilamkhuba zingamenzanga lutho ngoba makungukuthi uzibonile uzoziceba? Lento iyasidida ngoba akukho nokutheni esikusolayo,” kuchaza umthombo.
Uqhube wathi abazi ukuthi yini ebingase iholele ekutheni umufi abulawe ngalesi sihluku.
“Ubengumuntu ozithulelayo nozilungele engaqali muntu asazi ukuthi kungani ebulewe. Sesithembe amaphoyisa ukuthi adlale indima yawo ekutholeni lezi zigila mkhuba ngoba asisoze sakuthola ukuphumula singalazanga iqiniso. Mhlawumbe ukwazi iqiniso kuyosisiza ukuthi sixole kuthobeke nezinhliziyo noma engeke esavuka umfowethu.”
Okhulumela amaphoyisa esiteshini iPlessislaer uKapteni Musa Ntombela usiqinisekisile isigameko wathi bekungakaboshwa muntu.
“Amaphoyisa aphenya icala lokubulala kulandela ukudutshulwa kubulawe owesilisa eMbali Unit J ngoMsombuluko ekuseni. Amaphoyisa athole amagobolondo ezinhlamvu angu-8 endaweni yesigameko nokusolwa ukuthi iwona okwadutshulwa ngazo umufi. Bekungakaboshwa muntu,” kubeka UKapteni Ntombela.